I-2302 NO.57 Jinbin Avenue, iSithili saseHedong, iTianjin, China
Ingqele eqengqelekileyo yesilic yentsimbi
Ukubhiyozela iminyaka eyi-100 yasekwa i-CPC
Imbali yimbali yelizwe kunye nabantu. Ukusuka ngo-1921 ukuya kowe-2021, loluphi uhlobo lwentsomi lwekhulu leminyaka eliye iqela lamaKomanisi laseTshayina labakhokelela abantu baseTshayina ukuba babhale phantsi? Uzalelwe ebumnyameni, ukhulela ekubandezelekeni, uvuka umva, kwaye ukhula emzabalazweni, ukusuka kumbutho on ...
Iseshoni yokuqala yokwabelana ngoZhanzhi Group ngo-2021
Yakha isimbo sokufunda kunye nokwenza iqela elixhomileyo Ngeemfuno zenguqu yenkampani kunye nokuphuculwa, ukugxila kwethu kube ngakumbi kuphuhliso kunye nenkonzo yabathengi bokugqibela, kugxila kwimisebenzi eyahlukeneyo, kugxila kuphuhliso lwamashishini, kunye nokuphucula i-servi yobungcali iyonke. ..
Isiseko sobomi beshishini, umsebenzi wenyanga esemgangathweni wenziwa ngempumelelo
Nge-18: 00 ngoMeyi wesi-6, uQuanzhou Zhanzhi Ukwenziwa aququzelele intlanganiso yokuhlanganisa umsitho weNyanga yoMgangatho kaMeyi ukuqinisa inkqubo, ukudala imeko yokuqinisekisa umgangatho kuyo yonke inkampani, kunye nokuzabalazela ukukhula kunye nomgangatho wemveliso, ngaloo ndlela kusenziwa ukomeleza. ..
Bamba izandla, masihambe kunye Ngo-Epreli, iTianjin igcwele intwasahlobo, amafu akhanyayo kunye nomoya opholileyo. Kule ntwasahlobo, zonke izinto ziyavuseleleka, samkela ikota yethu yokuqala yeTianjin Zhanzhi ye-2021 Dongli Lake ye-12-kilometre yokuhamba ngomsebenzi wokwakha iqela. Ngo-8: 30 kusasa ngoMgqibelo, ...
Umkhombandlela ocacileyo, ukuhambelana nohlaziyo, wandlala ikamva
Ingxelo yoNyaka ye-2021 yeQela leZhanzhi yeNgqungquthela yeNgqungquthela yeNgqungquthela ye-2021 yeZhanzhi yonyaka ibibanjelwe eSanjia Port, ePudong New Area, eShanghai ukusukela ngomhla wama-25 ukuya kowama-28. Abantu abangama-54 kubandakanya abaphathi bamaqela, abaphathi ngokubanzi benkxaso-mali, kunye nabaphathi besebe kwikomkhulu ...
Iinjongo ezingatshintshiyo, ukumiliselwa okungaguquguqukiyo, intando emanyeneyo
Ngonyaka wama-2021 oShishino lwaseShanghai kunye neNkomfa yoNyaka yokuSasazwa koMsebenzi iNkomfa yoShishino yaseShanghai yowama-2021 yabanjwa eWuxi ukusukela ngomhla we-12 ukuya kowe-14. Abantu abangama-23 abavela kuMphathi Jikelele weQela elikwiLanga, uMzi-mveliso waseShanghai kunye noMphathi Jikelele wezoRhwebo uCai noBai, ...
Masamkele intwasahlobo, sihlwayele ithemba
Xa intwasahlobo ibuyela emhlabeni, iVientiane ithatha inkangeleko entsha. Eli lixesha elifanelekileyo lokuhlwayela kunye nokulima. Ngentsasa yango-Matshi 6, uChongqing Zhanzhi waququzelela bonke abasebenzi ukuba babambe uSuku lweArbor kunye noMnyhadala weNtwasahlobo ngomxholo othi "Ukwamkela iMbewu yeNtwasahlobo kunye neThemba" ....
Ngama-2021 iNkomfa yoNyaka yokuSasazwa koShishino kwiFujian Zhanzhi
Kwi-2021, iNkomfa yoNyaka yokuSasazwa koLawulo lweFujian Zhanzhi yabanjwa eZhangzhou Changtai nge-5 kaMatshi ukuya kwi-7, kunye nabantu abangama-75 kumphathi jikelele weSun Wenyao kunye neenkampani ezine kwiSithili saseFujian abathathe inxaxheba entlanganisweni. I-ajenda yale ntlanganiso ibandakanya isemina ekhethekileyo, i-opera ...
Nokuba yeyiphi na indima oyidlalayo, awuzange ube phantsi
Ngo-Matshi kufana nentwasahlobo, kwaye lusuku loSetyhini lwonyaka. Xa kufikwa kuSuku lwaBasetyhini, into yokuqala endiyifunayo kukubhala iileta ndithumele iintyatyambo kumama ndisemncinci, kwaye abasebenzi ababhinqileyo abangene kuluntu kufuneka nabo bonwabele izibonelelo zale holide. UNowa ...
Ukusuka ekhaya ukuya ekhaya, ubushushu obufanayo
Usuku lwesiThathu loSomashishini oluVulekileyo lwaseGuangdong Zhanzhi ngo-2020 Ukomeleza unxibelelwano lweendlela ezimbini phakathi kwamashishini kunye nabasebenzi kunye neentsapho zabo, ukudala umoya ohambelanayo kunye nokuphumelela ukuphumelela, ukomeleza umanyano lweshishini, ubushushu ...
Iqela leZhanzhi liphumelele isihloko se "2020 soMboneleli oGqwesileyo"
Ukusuka ngo-2010 ukuya ku-2019, iwebhusayithi yeKhaya leNsimbi ibibambe imisebenzi elishumi elandelelanayo "yokuthembeka kunye nabaxhasi beBranti", ebonelela ngamathuba oshishino lwentsimbi lwasekhaya kunye namashishini okulungiselela ukubonisa, ukufunda nokufunda omnye komnye, kwaye baphumelela ...
I-Zhanzhi Group iphumelele isihloko esithi "Ababoneleli ngeGolide abali-100 abaPhezulu beLange Steel Network ngo-2020"
I-2020 iZhanzhi Group Inkxaso-mali yoQeqesho yoBunkokeli sele ingaphezulu kwenyanga enye kuqalile uqeqesho lobunkokeli kwisigqeba seZhanzhi Group. Inkqubo yoqeqesho yayiququzelelwe likomkhulu leqela, kunye nabadala abangama-35 ...